Booqashada Salva Kiir ee dalka Itoobiya - BBC News Somali
Booqashada Salva Kiir ee dalka Itoobiya
Booqashadan Salva ayaa ku soo aadaysa iyadoo qaybo dalkaas ka mid ah lagaga dhawaaqay macaluul
Madaxweynaha Suudaanta koofureed Salva Kiir ayaa waddanka Itoobiya ku jooga booqasho 3 maalmood ah. Waxaa la filayaa inuu maanta wadahadal la yeesho ra'iisul wasaaraha dalkaas Hailemariam Deseleng, ka hor inta uusan saxiixin heshiisyo laba geesood ah oola xiriira amniga, tamarta iyo ganacsiga.
Booqashada madaxweyne Kiir ayaa ku soo beegmaysa xilli adag oo ay wajahayaan dadka Suudaanta Koonfureed oo qaybo ka mid ah dalkaasi la shaaciyay in ay ka jirto macaluul.
Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in ku dhawaad kala bar dadka dalkaasi ay saandkan wajahayaan gaajo halis ku ah nolashooda.
Beesha caalamka oo Mareykanka uu hormuud ka yahay ayaa macaluushan ku tilmaamay mid gacan ku sameys ah oo bani'aadanku sababay.
Waxa ayna hoggaamiyeyaasha dalkaasi ku eedeeyeen in ay ku guul dareysteen in ay u hoggaansamaan xabbad joojin la saxiixay bishii Agosto ee sanadkii 2015-kii isla markaana ay sii daba dheereeyeen xasaaradda siyaasadeed ee dalkaasi.
Hal malyan oo ruux ayaa ka carartay dalka Suudaanta Koonfureed
Heshiiskaasi xabbad joojinta oo aan cago buuxa ku taagnayn, ayaa mar kale la filayaa in lagu gorfeeyo wada hadallo u dhaxeeya madaxweyne Kiir iyo ra'iisal wasaaraha Itoobiya.
Waddanka Itoobiya ayaa magan-gelyo siiyay ku dhawaad 300 oo kun oo qof oo qaxooti ah oo dalkaasi Suudanta Koonfureed ka soo qaxay tan iyo markii colaadda sokeeye ay dalkaasi ka curatay bishii 12naad ee saandkii 2013kii.